काठमाडौँ – पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी ब्रत आजदेखि सुरु भएको छ । पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना स्वस्थानी ब्रत र माघ स्नान गरिन्छ । पौष शुक्ल चतुर्दशीका दिन हातगोडाको नङ काटी स्नान गरी शुद्ध बस्त्र पहिरिएर यसको सुरुवात हुन्छ । बिहान माघ स्नान गरी मध्याह्नकालमा महादेवको पूजा गरिन्छ । बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्डअन्तर्गत माघ माहात्म्यको कुमार अगस्त्यबीच संवाद भएको स्वस्थानी ब्रत कथा सुन्ने सुनाउने परम्परा छ । एक महिनासम्म यो विधिबाट ब्रत गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन १०८ जनै, १०८...
सडक बोर्डको बार्षिकोत्सवमा सहभागी हुन गएका सरकारी पधादिकारीको गाडीमा तोडफोड तथा आगजनी
१५ पुस, काठमाडौं । शुक्रबार दिउँसो बानेश्वरमा खुलेआम उच्चा पदस्त सरकारी कर्मचारीको गाडीमा तोडफोड तथा आगजनी भएको छ | उक्त घटनामा वागमती सभ्यता एकीकृत समितिका किशोर शाक्यले प्रयोग गरेको बा २ झ १३९२ नम्बरको स्कर्पियो जलेर ध्वस्त भएको छ | सडक बोर्डको १४औ बार्षिकोत्सवमा सहभागी हुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रि श्री रमेश लेखक, राज्य मन्त्रि श्री सिताराम महतो, अर्थ सचिब, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिब, सडक बिभाग तथा सडक बोर्डक उच्चा अधिकारीहरु लगायत बिभीन्न सडक सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो | सोहि कार्यक्रम अन्तिम चरणमा प्रवेस...
काठमाडौं , पुस ११ - रोजगारकिा लागि विभिन्न समय खाडी मुलुक पुगेका धादिङका २३ युवा लामो समयदेखि परिवारको सम्पर्कमा नआएको उजुरी परेका छन् । यी मध्ये मलेसियामा १२, भारतमा तीन, साउदीमा दुई कुवेतमा दुई, युएईमा दुई, कतारमा एक र जर्जियामा एकजना बेपत्ता छन् । धादिङमा पछिल्लो दुई वर्ष अवधिमा सूचना तथा परामर्श केन्द्रमा तीन सयभन्दा बढी उजुरी परे । यीमध्ये २३ युवा परिवारको सम्पर्कमा नआएको केन्द्रले जनाएको हो । बेपत्तामध्ये कागजपत्र अभावका कारण निकै कमलाई मात्र उद्धार गर्न सकिएको सामी परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक गंगा सुवेदीले बताइन् ।आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ...
हेटौंडा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम शुरु
हेटौंडा–७ नागस्वतीमा रहेको हेटौंडा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो १८ औँ वार्षिकोत्सव सप्ताहव्यापी कार्यक्रम विहीबारबाट शुरु गरेको छ । सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्र्तगत बिहिबार पहिलो दिन हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६, ७, ८, १६ र १८ मा घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरी २ सय ७ जना सदस्यहरु संस्थामा थप गरिएको छ । थप हुने नयाँ सदस्यहरुलाई एक हजार रुपिँया बरावरको १० कित्ता शेयर वितरण गरिएको थियो । संस्थामा हालसम्म नयाँ र पूराना शेयर सदस्य गरी २ हजार ९ सय ८९ जना शेयर सदस्य आवद्ध भएका छन् । सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्र्तगत शुक्रबार हेटौँडा ७ र ८ मा सरसफाई कार्यक्रम...
काठमाडौं ,१० पुस ‘दोस्रो विवाहका बारे मैले नसोचेको, नचाहेको होइन। तर म मेरा आत्मियसँग फेरि विवाह गर्नेबारे कुरा गर्छु उनीहरूको अनुहारको भाव नै परिवर्तन हुन्छ, कोही कोही त जिब्रो नै टोक्छन्,’ चितवनकी जाहेदा खातुन (नाम परिवर्तन) ले पीडा पोखिन्। जाहेदा २८ कि भइन्। १८ वर्षमा विवाह गरेकी उनले २० कि नहुँदै सम्बन्धविच्छेद गरिन्। विवाह गरेको छोटो समयमै सासु र नन्दहरूको कुरा सुनेर ङीमान्‌ले दिनहुँ कुटपिट गर्न थालेपछि जाहेदाले सम्बन्धविच्छेद गरेकी हुन्। मुस्लिम समुदायकी उनी अहिले आठ वर्षकी छोरी लिएर माइतीको शरणमा छन्। सानै उमेरमा विहे भएकाले उनको शिक्षा...
काठमाडौँ, पुस ४ - स्थापनाको आधा दसकपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफ्नो आधिकारिक इतिहास लेख्ने अभियानमा जुटेको छ। नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय भए पनि लिखित आधिकारिक इतिहास नभएको र यसबाट विश्वविद्यालय सञ्चालनमा केही असुविधा भएको महसुस गरिएपछि प्राध्यापक विश्वविद्यालयको इतिहास लेखनमा जुटेका हुन्। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ। विश्वविद्यालयले यसका लागि इतिहास केन्द्रीय विभागका प्रा. डा. भगेश्वर पङ्गेनीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ र हाल उक्त समितिले इतिहासको खोजी सुरु गरेको छ। समितिका संयोजक पङ्गेनीले विश्वविद्यालयको इतिहास लोप हुने...
काठमाडौं, मंसिर ३० -लम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने क्रममा भेटिएको पहेँलो वस्तु कुनै बहुमूल्य धातु नभएको पुनः पुष्टि भएको छ। यो खबर हामीले आजको कारोबार दैनिकबाट लिएका हौ। अघिल्लो बिहीबार सुरुङ खन्ने क्रममा अम्बाथान साइटमा पहेँलो पदार्थ भेटिएपछि खानी बिभागमा परिक्षणका लागि पठाइएको थियो । बिभागले गत सोमबार नै त्यो वस्तु सुन नभएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइसकेको थियो । तर स्थानीयले सुन नै भएको दावी गरेपछि बिभागले पुनः परिक्षण गरेको थियो र अहिले पनि सुन नभएको प्रमाणित भएको खानी तथा भूगर्भ बिभागका प्रवक्ता केडी झाले जानकारी दिए। सुरुङ खन्ने क्रममा...
पोखरामा टिप्पर दुर्घटना एकको मृत्यु, एक घाइते
पोखरा - पोखराबाट लेखनाथतर्फ जाँदै गरेको ग १ ख ३७१८ नंको टिप्पर गएराति विजयपुर खोलामा खस्दा एकजनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा परी टिप्पर चालक तनहुँ शुक्लागण्डकी–१ राईपुरका २७ वर्षीय टुकबहादुर क्षेत्रीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । गाडीको चालकका सहयोगी प्रेम नेपालीको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । तीव्रगतिका कारण अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको बताइएको छ । ...
काठमाडौं, मंसिर २९ - अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)को एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन काठमाडौंमा हुने भएको छ। करिब २७ वर्षपछि एसिया प्रशान्त क्षेत्रका केही गृहमन्त्री र ५१ देशका प्रहरी प्रमुख नेपाल आउन लागेका हुन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्माका अनुसार आगामी १७ जनवरीमा उनीहरू नेपाल आइपुग्नेछन्। सोही दिनबाट काठमाडौंमा सम्मेलन सुरु हुने एआईजी शर्माले जानकारी दिए। तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, मानव बेचबिखन, लागूऔषध तथा संगठित अपराध...
किराँतलाई उधौली र नेवारहरुलाई योमरी पूर्णिमाको रमझम
काठमाडौं । किराँत समुदायले हर्षोल्लासका साथ आज(मंगलबार) उधौली पर्व मनाइरहेका छन् । उधौली पर्व मानिस, जनावर तथा चराचुरुङ्गी लेकतिरबाट बेसीतिर बसाई सर्ने समय भएको संकेत गर्न तथा अन्नबाली भित्र्याएको खुसीयालीमा मनाइने चलन छ । प्रकृतिपूजक किरात समुदायको भाषा, संस्कार र संस्कृतिले आ–आफ्नो पहिचान दिलाउने र अस्तित्व जोगाउने भएकाले उधौलीका अवसरमा संसारभरका किरात समुदायले यो पर्व मनाउने गर्दछन् । विशेष गरी किरात राईको बसोबास रहेको पूर्वी पहाडि जिल्ला भोजपुर, धरान, सुनसरी, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बुलगायत काठमाडौंमा यो पर्व मनाउने गरिन्छ । उधौलीका...
काठमाडौँ – देशमा बेरोजगारीको समस्याले विदेशिने युवाको सङ्ख्या बढ्दो छ तर लोक सेवा आयोगले १२६ वटा विज्ञापनबाट १७२ पदका लागि गरेको विज्ञापनमा एउटै दरखास्त परेन । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि गरिएको विज्ञापनमा खुला, आन्तरिक, समावेशी सबैमा दरखास्त नपरेको जानकारी आयोगले दिएको छ । दलित, अपाङ्ग, महिला, मधेसी, जनजातिका लागि समावेशीतर्फ छुट्टाइएका पदहरूमा समेत दरखास्त परेनन् । आयोगले लिएको परीक्षामा अन्तर्वार्तामा छनोट भएका ५५ पदमध्ये २० पदमा कुनै उम्मेदवारको सिफारिस हुन सकेन । यस्तै, १० वटा विज्ञापनबाट २६ पदका लागि दरखास्त परी लिखित परीक्षा सञ्चालन भएकोमा कुनै पनि...
काठमाडौं, मंसिर २६ -ममी (लक्ष्मी नेपाली) त्यस दिन (मंगलबार) गाउँकै छिमेकी च्याङ्बा तामाङको कोदो टिप्न जानुभएको थियो। म दुई वर्षको सानो भाइ सुशीललाई हेरेर घरमै बसेको थिएँ। त्यहीबीचमा भाइ धेरै रोयो। सायद आमाको दूध खान खोजेको थियो। त्यसैले मैले भाइलाई दूध खुवाउन ममी भएकै ठाउँमा लगेँ। त्यतिवेला सायद चार बजेको थियो होला। ममीलाई कोदो टिप्ने मेलामा भेट्यौँ। मेलाबाट छुटेपछि ममीले म र भाइलाई हतार–हतार घर ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। किनकि घरमा गाई दुहुना छ, त्यसैले ममी आत्तिनुभएको थियो। त्यस्तै, करिब ५ बजेको हुनुपर्छ। मेरो स्कुलमा सामाजिक विषय पढाउने सर (हीरा लामा) र...
तेह्रथुममा बस दुर्घटना हुँदा पाँचजनाको मृत्यु, २३ घाइते
काठमाडौं । तेह्रथुमको जिरी–खिम्ती–म्याङलुङ सडकखन्डअन्तर्गत् गढीभीरमा आइतबार यात्रीबाहक बस दुर्घटना हुँदा पाँचजनाको मृत्यु भएको छ । तीनजनाको घटनास्थलमै र दुईजनाको जिल्ला अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा परी २३ जनाभन्दा बढी यात्री घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये पाँचजनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ । मृतकहरुको सनाखत हुन सकेको छैन । धरानबाट तेह्रथुमको औंसीडाँडातर्फ आउँदैै गरेको ना४ख २८६५ नम्बरको बस गढीभीरको सडकबाट करिब २ सय मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ । नेपाली प्रहरी, सशस्त्र र स्थानीयवासीले घाइतेहरुको उद्धार गरिरहेका छन्...
जन्ती बसमा कार ठोक्कीँदा चारजनाको मृत्यु, तीनजना गम्भीर
काठमाडौंः बाराको पथलैया अमलेखगन्ज सडक खण्डमा कार र बस जुद्धा चारजनाको मृत्यु भएको छ भने तीनजना गम्भीर घाइते भएका छन् । आज बिहान वीरगञ्जबाट हेटौंडाका लागि जन्ती लिएर जाँदै गरेको ना ६ ख ६७५४ बस र विपरीत दिशाबाट आइरहेको ना १२ च ८२९० नम्बरको कार ठोक्किएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार कारका चालक खोटाङका २३ वर्षका दीपकबहादुर थापाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने उपचारका लागि हेटौडा पुर्‌याएकी खोटाङकै कुमारी थापा र उनका ११ महिनाको छोरा जेनिस काफ्लेको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । त्यस्तै महेन्द्र आलेको उपचारका क्रममा हेटौंलास्थित जिल्ला...
ट्रकले ठक्कर दिँदा बहुला खोलाको पुल भाँचियो, पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा ठुला गाडी रोकिए
कावासोती, २६ मङ्सिर । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीको देवचुली–१२ दलदले स्थित बौलाहा खोलाको पुलमा ट्रकले ठक्कर दिँदा आज बिहान पुल भाँचिएको छ । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ गुडिरहेको ना६ख ३०१७ नंको ट्रकले पुललाई ठक्कर दिँदा पुल झोलुङ्गो जस्तो बनेको छ । पुल भाँचिएपछि यात्रुबाहक बस र मालबाहक ट्रक अलपत्र बनेका छन् । साना हल्का सवारी साधन भने पुल भाँचिएको भागभन्दा अर्को भागबाट सञ्चालनमा ल्याइएको इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाले जानकारी दिए । बौलाहा खोलामा डाइभर्सन निर्माण गरेरमात्र सवारी साधन आवात जावत गराउन सकिने...